NCC nwetara ihe nrite ndị ọzọ maka ịrụ ọrụ nhazi
21 sekọnd ago
Ụlọ ọrụ mgbasa ozi Naijiria (NCC) enwetala ihe nrite ọhụrụ sitere n'aka ndị dị iche iche maka ntinye aka ya n'ịkwalite mgbanwe dijitalụ na Nigeria.
Ndị NCC welitere Global System of Mobile Communications (GSM) afọ iri abụọ gara aga, na-ebute oge ọhụrụ nke nzikọrịta ozi ọha na Nigeria.
Enyere kọmishọna na ndị ọrụ ya ihe nrite ọhụrụ a na mmemme dị iche iche na-echeta mgbanwe afọ 20 nke Naijiria na nzikọrịta ozi dijitalụ.
Na Nọvemba 11th, 2021, ọgbakọ akpọrọ 20 Years of Digital Revolution nke GSM kwadoro n'ụlọ ọgbakọ ogbako ikuku nke Nigeria dị na Abuja. N'otu ụbọchị ahụ, NCC meriri 'Technology Transformer Award' na mmemme e-Business Life Magazine haziri na Oriental Hotel dị na Lagos iji mee ncheta afọ iri abụọ nke ọmụmụ GSM.
Davido's Airtime and Data giveaway Scheme is a rip-off – NCC
Ndị NCC nwetakwara ihe nrite 'Regulator of the Year' na New Telegraph Awards 2021, nke emere na Fraịde, Nọvemba 19, 2021, n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ Federal Palace dị na Lagos.
Wezụga ịnata onyinye nturu ugo na mmemme kwa afọ nke ndị aka na-eme atụmatụ haziri, dị ka Oscars nke ụlọ ọrụ telecom nke Nigeria, Nigeria Tech Innovations & Telecoms Awards (NTITA), Kọmishọna ahụ enwetala ọtụtụ ihe nrite na mmemme kwa afọ nke ndị na-etinye aka na atụmatụ haziri, gụnyere ụlọ ọrụ telecom nke Nigeria. ngalaba nke kwekọrọ Oscars, Nigeria Tech Innovations & Telecoms Awards (NTITA), 2021.
N'otu aka ahụ, na mmemme e mere na NAF Conference Centre dị n'Abuja, otu panel nke nwere ndị egwuregwu dị iche iche na mpaghara telecom na ICT tụgharịrị uche na afọ iri abụọ gara aga nke telecom liberalization n'okpuru nlekọta nke NCC.
Ndị omebe iwu ahụ kwenyere na ngalaba ahụ emeela mgbanwe na-enweghị mgbagha, mgbanwe ngwa ngwa nke metụtara mpaghara ọ bụla ọzọ nke akụ na ụba Nigeria.
Ndị otu ahụ gwara ndị bịaranụ ka ha nyochaa ịdị mkpa nke azụmahịa telecom n'ihe gbasara nka dijitalụ na nka dijitalụ ma e jiri ya tụnyere ihe ọ bụ afọ 20 gara aga.
Ndị na-eme ihe ngosi, n'otu n'otu, lere anya ka ịnweta ekwentị, ikike ị nweta ego, na njikọta siri ike nyere ndị mmadụ n'ụdị ndụ niile aka, ọkachasị ndị sitere na ọnọdụ akụ na ụba obodo dị ala.
Iji weghara ọganihu ndị ahụ nke ọma, otu panel ahụ enyochakwara mmetụta zuru oke nke omenala dijitalụ site na echiche akụkọ ihe mere eme.
Ndị otu ahụ kwenyere na a ga-enwekwu uru a ga-enweta site na teknụzụ ọhụrụ dịka Naijiria na-ezube iwulite netwọk nke Fifth Generation (5G).
Dọkịnta Ikechukwu Adinde bụ onye isi ngalaba na-ahụ maka ọhaneze na kọmịshọna ahụ kwuru na nnukwu ihe nrite e nyere NCC n'ime abalị abụọ gosiri na ụlọ ọrụ ahụ na ndị na-ahụ maka ya na-akpakọrịta siri ike na nkwenye ha na NCC na-arụ ọrụ ya.